တက္ကသိုလ် ပညာရေး မူဝါဒ ပြန်ဆွေးနွေးမယ် - BBC News မြန်မာ
Image caption အာဏာပိုင်တွေ ရေးဆွဲတဲ့ တက္ကသိုလ် ပညာရေး မူဝါဒ မူကြမ်းကို တက္ကသိုလ် ဆရာဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ လက်မခံ
တက္ကသိုလ် ပညာရေး မူဝါဒ မူကြမ်းကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးကြဖို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ. တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကြား သဘောတူညီမှု ရခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေး မူဝါဒ မူကြမ်းကို အစအဆုံး ပြန်လည် ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ နှစ်ဘက် အမြင်တွေကို ဖလှယ်ကြဖို့ တနင်္လာနေ့က ကျင်းပတဲ့ လစဉ် အစည်းအဝေးမှာ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက သဘောတူခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ အသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ စိုင်းခိုင်မျိုးထွန်း က ပြောပါတယ်။
ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ထပ်မံ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ပါဝင်သင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဖိတ်ကြားဖို. တက္ကသိုလ် ဆရာတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေက တောင်းဆို ထားတာကိုလည်း လက်ခံခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ နောက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် သင့်တော်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဖိတ်ကြားနိုင်ရေး အတွက် လူစာရင်း ပြုစုပေးဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဒေါက်တာ စိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီအစည်းအဝေးပွဲရဲ့ ရလဒ်တွေကြောင့် ပညာရေး မူဝါဒ မူကြမ်း ရေးဆွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ဆရာ၊ဆရာမ နဲ့ ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့် ပေးဖို့ အစည်းအဝေးမှာ တောင်းဆိုတာကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေဘက်က လိုက်လျောခဲ့ပါတယ်။
တခါ ဒီစည်းဝေးပွဲမှာ တက္ကသိုလ်ချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ရှိသင့် မရှိသင့် ဆိုတာကို ဆွေးနွေးဖို. အာဏာပိုင်တွေက အဆိုပြုခဲ့တယ်လို. သိရပါတယ်။
မူလက အာဏာပိုင်တွေ ရေးဆွဲထားတဲ့ မူဝါဒ မူကြမ်းမှာတော့ တက္ကသိုလ်တွေကို တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုကောင်စီကနေ ထိန်းချုပ်ထားမယ့် သဘောမျိုး သက်ရောက်နေတာကြောင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေရော ဆရာ၊ ဆရာမတွေကပါ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။